Yini evela kuLinux?
Kusuka kuLinux (aka <° Linux) isayithi elinikezelwe ezihlokweni ezihlobene ne- isoftware y ubuchwepheshe bamahhala. Inhloso yethu akuyona enye ngaphandle kokuhlinzeka bonke abasebenzisi abasanda kuqala emhlabeni we I-GNU / Linux, indawo lapho ungathola khona ulwazi olusha ngendlela elula futhi enembile kunazo zonke.
Njengengxenye yokuzibophezela kwethu emhlabeni weLinux neFree Software, kwaDesdeLinux besinguzakwethu we Mahhala nge 2018 omunye Imicimbi ebaluleke kakhulu emkhakheni eSpain.
Ithimba lokuhlela elivela ku-Linux lakhiwa iqembu le- ochwepheshe ku-GNU / Linux, i-hardware, ukuphepha kwamakhompyutha nokuphathwa kwenethiwekhi. Uma nawe ufuna ukuba yingxenye yeqembu, unga sithumele leli fomu ukuze sibe ngumhleli.
Umsebenzisi olingene we-Linux onothando lobuchwepheshe obusha, i-gamer ne-Linux enhliziyweni. Ngifunde, ngasebenzisa, ngabelana, ngajabulela futhi ngahlupheka kusukela ngo-2009 ngeLinux, kusuka ezinkingeni zokuncika, ukwethuka kernel, izikrini ezimnyama nezinyembezi ekuhlanganisweni kwe-kernel, konke ngenhloso yokufunda? Kusukela lapho ngisebenze, ngavivinya futhi ngancoma inani elikhulu lokusatshalaliswa lapho izintandokazi zami ziyi-Arch Linux elandelwa yiFedora ne-OpenSUSE. I-Linux ngokungangabazeki ibinethonya elikhulu ezinqumweni ezihlobene nempilo yami yezemfundo nokusebenza njengoba bekungenxa yeLinux ebenginentshisekelo futhi njengamanje ngibheke ezweni lohlelo.
Ukufaka kwe-Linux Post
Kusukela ngisemncane bengibuthanda ubuchwepheshe, ikakhulukazi obuphathelene ngqo namakhompyutha nezinhlelo zabo zokusebenza. Futhi iminyaka engaphezulu kwengu-15 ngithandana ngokuhlanya ne-GNU / Linux, nakho konke okuphathelene ne-Free and Open Source Software. Kukho konke lokhu nokuningi, namuhla, njengoNjiniyela weKhompyutha futhi nginesitifiketi samazwe omhlaba ku-Linux Operating Systems, bengibhala ngothando futhi iminyaka eminingana manje, kule webhusayithi enhle futhi eyaziwa kakhulu eyiDesdeLinux. Engabelana ngayo nawe nsuku zonke, okuningi engikufunda ngezihloko ezisebenzisekayo neziwusizo.
Uthando lwami ngokwakhiwa kwamakhompiyutha lungiholele ekutheni ngiphenye ungqimba oluphakeme futhi olungahlukaniseki ngokushesha: uhlelo olusebenzayo. Ngothando olukhethekile lohlobo lwe-Unix ne-Linux. Kungakho ngichithe iminyaka eminingana ngazana ne-GNU / Linux, ngithola isipiliyoni ngisebenza njengedeski losizo futhi nginikeza izeluleko ngobuchwepheshe bamahhala bezinkampani, ukusebenzisana kumaphrojekthi ahlukahlukene wesoftware emphakathini, kanye nokubhala izinkulungwane zezindatshana zedijithali ezahlukahlukene abezindaba abakhethekile kuMthombo Ovulekile. Njalo unomgomo owodwa engqondweni: ukungayeki ukufunda.
Umthandi weSoftware yamahhala kanye nomhlaba wezinhlelo. Ngaqala emhlabeni weLinux ngibonga ukusatshalaliswa kweMandrake 7 futhi cishe eminyakeni engama-20 kamuva ngisesekuleli zwe ngizama njalo ukwenza okuncane kimi. Kusukela lapho, angizange ngithole kuphela idigri phambili ngisebenzisa i-Free Software kepha ngenze ama-athikili amaningi nezifundo kuwo.
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara)
Ngiqale uhambo lwami eLinux emuva ngo-2007, kule minyaka edlule ngihambile inani elinqunyiwe lokusatshalaliswa, sengibonile inqwaba yabo izalwa futhi abanye abaningi befa, uma kumayelana nezintandokazi zomuntu engingakhetha i-ArchLinux ne-Debian ngaphezulu noma yimuphi omunye. Ngisebenze ngokomsebenzi iminyaka eminingi njengomphathi wamanethiwekhi nezinhlelo ze-UNIX, kanye nonjiniyela wewebhu wezixazululo ezenzelwe iklayenti.
Ngiyakuthanda ukuzicwilisa emhlabeni weLinux, ngigxile ekusetshenzisweni kwama-distros ayo, ikakhulukazi lawo enzelwe amabhizinisi. Inkululeko Yekhodi ilingana ngqo nokukhula kwenhlangano. Kungakho iLinux uhlelo olungeke lube khona osukwini lwami usuku nosuku.
Umhleli ojabulela iLinux nokusatshalaliswa kwayo, kangangoba kube yinto ebalulekile osukwini lwami usuku nosuku. Noma nini lapho kuphuma i-distro entsha eseLinux, angikwazi ukulinda isikhathi eside ukuyizama, futhi ngiyazi kahle.